Onye Mmezi Anna Sui
Kpakpando Ndaghari ndu
A na-akpọ ya onye nnabata nke alaeze ukwu nke ndị puppet ma ọ bụ onye mmebe-puppeteer. Onye na-eme ihe ngosi Anna Sui, onye akara ya nwere nnukwu ihe ịga nke ọma n'ókèala America, Europe, Eshia na Middle East, nwere ike na nhịahụ iji gbanwee ihe ngosi ya n'ime ihe ngosi na-atọ ọchị. A na-esekwa uwe ya niile na ngwa ya na agba na-egbuke egbuke. Na ọbụna na ya boutiques e nwere dị ịtụnanya ma dị iche iche mannequins na-enye aha nke onye mmepụta pụrụ iche anwansi.
Site na ogwu ka kpakpando
A mụrụ onye na-emepụta ihe n'ọdịnihu na Detroit, Michigan. O mere n'August 4, 1964. Ejiji malitere ịmasị nwa agbọghọ ahụ site na nwata. Nwatakịrị nwanyị ahụ, mgbe magazin ndị ya na-eji ejiji eme ihe, na-enwe oké mkpali, gbanyụọ site na ụdị uwe ha na-eri na ya, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-atụba ha n'ime nchekwa ya. Nanị ihe ndị a na-akpata ma ghọọ isi ihe mere ka Anna nwee ike ịmepụta uwe ya. Na mgbakwunye na ihe ndị na-emepụta magazin ahụ, o gosipụtara nkà ya na nke mbụ ya mgbe ọ bụ nwata, na-ejizi akwa ya na ndị enyi enyi ya na-eji ejiji mara mma, nke ọ na-eji ejiji dị iche iche.
Mgbe Sui gbanwere afọ iri na asaa, o kpebisiri ike ịmụ ihe ejiji ejiji. Nwatakịrị nwanyị ahụ maka ịmara ọrụ a ghọrọ onye na-amụrụ ụlọ akwụkwọ mmuta - Parson School of Design. Ọ bụ n'ebe ahụ ka onye enyi Anna na kpakpando na-eme n'ọdịnihu nke foto ụwa bụ Stephen Meisel, bụ onye kpọrọ nwa agbọghọ ahụ ka ọ bụrụ onye na-emepụta ihe na foto ya, mere. Ma ọ bụghị nke a, ma ọ bụ ahụmahụ ọzọ nke ọrụ maka onye na-emepụta ihe n'ọdịnihu ewetawo ọpụrụiche ọ bụla.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji, Anna na-anwa onwe ya site n'ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ uwe ụmụaka. Na-agbalịsi ike ịmepụta ụdị. Naanị na 1981 Anna Sui tọrọ ntọala ya. Aspustya afọ iri, na 1991, nkwado nke ndị enyi ya bụ Linda Evangelists na Naomi Campbell, Sui na-ahazi ihe ngosi mbụ ya nke nchịkọta ndị omempụ ọhụrụ. N'ihi ihe a na-ewu ewu nke ihe abụọ ndị a, ndị na-ede akwụkwọ ejiji na-ahụ ndị na-ewu ewu na-ewu ewu na-eto eto ma malite ịmalite inwe mmasị na ndị ahịa. Anna na-edozi nhazi nke onye mmebe talent maka aha ya. N'elu ngosi ya, onye mmepụta nyere ndị na-ege ntị nchịkọta jupụtara n'ịhụnanya ịhụnanya ma ghara ihie ụzọ. E gosipụtara ngosi ahụ na nke ọma, ọrụ nke Sui nọgidere na-arụ ọrụ na ndị ahịa ọhụrụ. Ọtụtụ ndị ọkachamara n'achụmnta ego na-eji obi ụtọ na-akwanyere onye mmepụta ọhụrụ ahụ ùgwù. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ akụkọ a na-akpọ akwụkwọ akụkọ bụ The New York Times bipụtara na ibe ya otu isiokwu zuru ezu nye AnneSui, bụ nke ọ kpọrọ onye mmebe ahụ bụ onye mmepụta nke afọ. N'oge na-adịghị anya, Sui na-enweta ezigbo onyinye nke ụlọ ọrụ ihe nlereanya na nhọpụta "New talent in world fashion."
Ya alaeze "puppet"
Anna Sui, nke sitere na ihe ndị ọ rụzuru, na 1991 na-emepe ụlọ ahịa mbụ ya n'otu n'ime mpaghara New York. A na-emepụta ụlọ ahịa a na nhazi nke ihe kachasị mma nke onye mmebe ejiji: mgbidi lavender, uhie uhie, ime ụlọ mmanya, ụlọ ndị na-acha uhie uhie na ihe ọkụkụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ isi. Site n'ụzọ, ihe ndị ọzọ niile ndị uwe ojii na-achọpụta na ndị na-emepụta ejiji na Amerịka, Japan, Germany, Italy na France nọ na-amasị ya na ụdị ụdị a. Ụdị Anna Sui aghọwo ọganihu nke ukwuu n'ọtụtụ mba. Ma maka ejiji ejiji ejiji, ha na-echeta mgbe niile (ihe a na-eme taa) akụkọ akụkọ ifo jupụtara na anwansi, ihe osise na ihe ebube. Ikekwe, ọ bụ kpọmkwem ihe ndekọ a nke na-adọta mmasị nke ọtụtụ ndị ọrụ ibe na ụlọ ahịa na ndị ahịa ndị edebanye aha na ya na-adịgide adịgide. Courteney Love, Patricia Arquette, Cher, Paris Hilton, Misha Barton, Blake, Lindsay Lohan, Christina Ricci, Naomi Campbell, James Icha na Sofia Coppola abughi ndi mmadu nile bu ndi ana-ere akwukwo nke Anna Sui.
Fans ndị na-adịgide adịgide na-achọrọ mgbe nile site n'aka onye mmepụta ejiji ihe ọhụrụ. Otu ihe a na-aga maka Sui, onye ji ịnụ ọkụ n'obi na-etinye echiche ya n'inweta akara akpụkpọ ụkwụ na-aga nke ọma, mgbe ahụ, na ntinye nke ịchọ mma, ihe nsure ọkụ na ngwa ngwa. Onye na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ maka oge mbụ n'afọ 1994 gosiri otu ngosi ejiji naosennem. N'ịtali na Italy, akpụkpọ ụkwụ ndị a zuru oke ọ bụghị naanị maka oge, kama maka oge mgbede. A na-eji ihe ndị dị ka silk, velvet, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na agwọ, ajị atụrụ na mamsham.
N'afọ 1999, ụwa hụrụ mmanụ ísì mbụ ya, bụ Anna Suerekl nke dị naanị ya n'ime otu ụdị "nrọ" ya. Mgbe ọzọ, ihe ndị dị otú ahụ dịka "Ụtọ Ịhụnanya" (2002), "Swami Doll Love" (2003), "Oh, Love" (2004), "Nchọsi Nzuzo" (2005) na iri na abụọ anwansi aromas. A na-eji ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ niile kee ụmụ nwanyị ndị na-ahụ n'anya bụ ndị kweere na ọrụ ebube na ịgba afa. Na otu okwu, ụwa nke ísì ísì Anna Sui bụ ezigbo anwansi. A sị ka e kwuwe, onye ọ bụla ma Anna nwere ike iji nkà mara ma mejuputa na ihe ndị dị mkpa nke fashionistas nke oge a. Nke a na-egosi onwe ya: mmanụ ndị na-esi ísì ụtọ enwetawo nnukwu ihe ịga nke ọma n'etiti ndị mmasị nke Sui.
Na nke a, onye mmebe ejiji anaghị akwụsị, na 2009 kwa, ọ bụrụ onye mmekọ nke ụlọ ọrụ "Target" iji mepụta uwe ọhụrụ nke na-ejikọta ụdị nke Upper East Side. N'ịbụ onye sitere n'aka onye mmepụta ejiji maka usoro TV a na-ewu ewu "Gossip Girl". Nchịkọta a nwere njedebe dị nta ma dị na Septemba nke otu afọ ahụ, n'ime izu ole na ole. Nakwa na mmalite afọ 2009, a na-akpọ uwe ụmụ nke a na - akpọ "Anna SuiMini". Mgbe nke ahụ gasịrị, Anna Sui bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na Samsung Electronics.
Ana Swikak rụzuru
Akwụkwọ niile a ma ama a na-akpọ Anna Sui a na-emepụta ejiji na-adịghị eji oge dị ogologo na-atụgharị ọganihu na ihe niile dị na ya, mana maka ndị na-achọ ịmepụta.
Ọzọkwa, Anna nwere ike ịbanye na ndepụta kachasị mma nke akara ngosi kachasị mma nke ụdị ejiji nke afọ iri, nke magazin Time na-ejikọ.
N'afọ 2009, onye mmepụta na-enweta onyinye nke American Award, bụ nke Council Council of Modelers na-enye. A na-enye ọdịda a maka ndị na-abanye, ndị a na-ewere onyinye ha na-eji eme ihe na American bụ otu n'ime ndị kasị elu.
Anna Sui na-enwekwa ọganihu n'inwe ọkwá dị elu nke ndị mmepụta a ma ama dịka Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Diane von Furstenberg, Bill Blass na Ralph Lauren. A kwadoro ndị a niile na-enye onyinye maka ụwa nke ejiji.
N'agbanyeghị, n'afọ 2006, magazin bụ "Fortune" nyere AnnaSui aka na-atụle ya, na-atụle ya na nde 400 nde.
Anna Sui ka ọ dị na 2010 mere ka ụwa mara mma na nchịkọta ọhụrụ ya na showameric Next Show Model.
Gwen Stefani: akụkọ ịhụnanya
Na-eduzi Tatiana Vedeneeva, autobiography
Stars nke show azụmahịa na ha ala phobias
Ezigbo ihe ngosi na-egosi "Top Model in Russian"
Onye na-emepụta TV nke ọma Slava Frolova
Ndụ onwe onye nke Maria Golubkina
Ihe ndekọ nke Julia Roberts
Egwuregwu maka ụmụaka n'èzí n'oge oyi
Mkpụrụ vaịn amị mkpụrụ na mmanụ aṅụ
Ugu na oven: nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka nri iberibe na dum
Iche dị iche iche maka ntutu isi
Nri na rhubarb na multivark
Jam na mmanụ aṅụ si dandelions - ntụziaka nzọụkwụ site nzọụkwụ na foto na vidiyo
Ntụziaka dị mfe: ugu ofe na tomato
Skewers nke imeju imeju
Oedipus gbara mgbagwoju anya na Electra
Ọrịa gastrointestinal ọrịa
Esi esi mee ka oriọna na ụlọ
Aro maka ịhọrọ uwe nwanyị na mgbụsị akwụkwọ 2015
Cupcakes na mkpụrụ vaịn
Silk chocolate achicha
Anatoly Papanov, biography na afọ nke ndụ
Ndị ọkachamara ọkachamara maka ntutu isi